iPhone 12: warar xan ah, bilaabid iyo wax kasta oo aan ognahay - iPhone News | Wararka IPhone
El iPhone 12, iPhone 12 Pro iyo iPhone 12 Pro Max waxay ku dhufan lahaayeen suuqa iyaga oo aan isbeddel weyn ku sameynin heerka naqshadeynta marka laga reebo soo kabashada cidhifyada iPhone 5 iyo kamarad afaraad. Intaa waxaa dheer, waxay ku dari lahayd markii ugu horeysay taageer 5G si loola jaanqaado horumarkii ugu dambeeyay ee ku xirnaanta internetka.
iPhone 12: taariikhda la sii daayo iyo qiimaha
In kasta oo Apple aysan daaha ka qaadin daahfurka illaa wax yar ka hor dhacdada soo bandhigidda, sannado soo bandhigiddeeda rasmiga ahi waxay ahayd bisha Sebtember ee sannad kasta, gaar ahaan usbuuca labaad, sidaa darteed waxay u badan tahay in sannadkan isla taariikhdaas lagu celiyo.
Waa inaan maanka ku haynaa in cudurka loo yaqaan 'coronavirus' uu saameyn ku yeelan karo wax soo saarka iyo soo bandhigida iPhone 12-ka, in kasta oo saamaynteeda la filayo inay yaraan doonto. Wixii ku saabsan taariikhda la sii deyn doono, isbadal weyn lama filayo sida laga soo xigtay ilaha DigiTimes.
Baaxaddiisa ayaa lagu qiyaasay inay ku sii jirto 6,1 inches laakiin isbeddelka ka yimaada LCD illaa OLED, oo qiimihiisu cusbooneysiintu ka kici doono 60Hz illaa 90Hz si uu u yeesho muuqaal dheecaan badan leh.
Iyadoo la tixgelinayo qiimaha moodooyinka hore iyo dhabbaha ay qaadan karto qaabkan cusub, iPhone 12 wuxuu ka badnaan karaa qiimaha 799 1.000 loogu talagalay qaabka ugu aasaasiga ah, € 12 ee loogu talagalay iPhone XNUMX Pro y 1.200 12 oo loogu talagalay iPhone XNUMX Pro Max. Qalabkan ayaa la filayaa inuu ka qaalisan yahay kuwii hore, sidaa awgeedna ay ku kacayaan kharashkooda cusub.
Naqshad kale oo ka raqiisan ayaa hore loo filayay: iPhone 9 ama SE 2. Waxaa la filayaa in la soo bandhigo bisha Maarso ama Abriil 2020.
Naqshadda IPhone 12
Fikradaha ugu dambeeya ee ku saleysan daadinta iyo xanta ayaa sharad ku jira afar kamaradood halkii laga heli lahaa seddexdii qaabkii hore, iyo geesaha siman taasi waxay ina xusuusinaysaa iPhone 5.
Sida ugu sarreysa, ilaha qaarkood waxay sharad ku galaan a yareynta qaddarka iyadoo lagu beddelayo allabariga Face ID. Si kastaba ha noqotee, falanqeeyayaal kale ayaa ku doodaya inay tahay mid ka mid ah tikniyoolajiyadda ugu horumarsan ee ay shirkaddu sameysay isla markaana ay wax u dhimeyso in laga tago oo kaliya ID ID.
Kaamiradani afaraad waxaa la qiyaasayaa inay yeelan doonto saxsanaanta weyn ee muujinta 3D walxaha, waxtar u leh walxaha sida Xaqiiqada Virtual.
Hadaad rabto inaad ogaato daqiiqadii ugu dambeysay iPhone 12 iyo dhamaan wararka xanta ah iyo xatooyada, waxaad sii wadi kartaa aqrinta warkooda hoosta.
Hadda waxaad istaagi kartaa Bakhaarka Apple oo waxaad qaadan kartaa Qalabka Battery MagSafe
by Toni Cortés samee 6 maalmood .
Hagaag, waxaa jira batariyaal MagSafe ah oo loogu talagalay iPhone 12 keydka dukaamada Apple. Marka waxaad leedahay…
by Toni Cortés samee 1 toddobaad .
Dhamaanteen waan ognahay in alaabada Apple ay hayaan qiimaha suuqooda si aad u wanaagsan markii loo isticmaalay a
Batariga cusub ee MagSafe wuxuu xaqiijinayaa iPhone 12 wuxuu taageeraa lacag-bixinta wireless-ka ah ee ka-noqoshada
Mid ka mid ah mowduucyada aan sida ugu badan uga soo hadalnay barnaamijyadeenna toddobaadlaha ah waa xanta ay Apple soo bandhigi karto ...
Shirkadda Cupertino ayaa hadda billowday batari MagSafe ah oo loogu talagalay iPhone 12 kaas oo bixiya suurtagalnimada in la soo dallaco ...
Xayeysiinta cusub waxay muujineysaa sawir qaadista iPhone 12 Pro Night Mode
Horumarka ku saabsan qalabka iPhone-ka ayaa u oggolaanaya dadka isticmaala inay la kulmaan inbadan oo ka mid ah hagaajinta korantada ...
Xadka iPhone 12 wuxuu ka badan yahay 100 milyan oo unug oo la iibiyay
by Ignacio Sala samee Toddobaadyada 4 .
Ragga ka socda Counterpoint Research ayaa daabacay warbixin ay ku sheegayaan in iPhone 12 horey u iibiyay ...
Apple waxay daabacdaa liistada alaabooyinka aan u dhowaan karin qalabka wadnaha
Markii la soo saaray iPhone 12, dhowr ka mid ah waxay ahaayeen dhakhaatiir aan indhaha wanaagsan ku arkin hirgelinta ...
Dib u soo cesho iPhone 12 Pro-kaaga oo ku dhexjiray kanaal mahadsanidiisa MagSafe
by Toni Cortés samee Bilaha 2 .
Waxaan horeyba ugu baran jirnay aaladda Apple badbaadinta nolosha milkiilaheeda iyadoo ay ugu wacan tahay shaqooyinka ay ka kooban tahay ...
IPhone 12 Pro Max wuxuu gaarayaa booska afaraad isbarbar dhigga koowaad ee DXOMark
Muddo dheer ayaan dhexdeenna ku haynaa noocyada cusub ee aaladaha iPhone 12, qaar ka mid ah aaladaha cusub ee keena war wanaagsan….
Waxaan ku jirnaa hangool Muhiim ah, oo ah Nuxur aan ku aragnay alaabooyin horeyba looga hadlay wax badan ... Waxaan haynaa ...
Apple wuxuu ku darayaa midab cusub oo guduud ah noocyada iPhone 12
Muhiimadda guga ayaa bilaabatay Tim Cook wuxuu bilaabay inuu ku dhawaaqo wararka ugu muhiimsan ee Apple leedahay ...